UKeshiya Kumari, umculi waseLos Angeles, owaziwayo kakhulu eMelika (ubuncinci kwimilo yefestile) phantsi kwegama elithi Kesh, otyholwa ngumntu owaziwayo wase-Italia indlu yaseVersace. Isihloko sesikhalazo seentombazana sasiyiqoqo le-spring-ehlobo le-2015-i-T-shirts yalo kunye nomfanekiso omnyama kunye nomhlophe okwakubonakala ngathi ubhalwe phantsi kwimidwebo yakhe eyenziwe ngo-2013 kwi-brand ye-American Apparel.
U-Keschia wabonisa ukusola kwakhe ngeefoto ezifanelekileyo kwi-Instagram, kumema uluntu ukuba uthelekise iimpapasho zokuqokelela kweVercece yakamuva kunye nokushicilelwa kombhali wakhe "Face Le New", eya kuthi, ngendlela, yaboniswa nguJordan Dunn noKara Delevin. Kwi-commentary kwisithombe umculi wachaza ukuba iqoqo lenziwe ngokusekelwe kwimisebenzi yalo mboniso wokuqala. UKeshiya wayelungiselela iqoqo le-American Apparel iminyaka emibili. Eyona nto ihlaselayo kakhulu, yonke into yokuqala yayingaphantsi kunexabiso elibi: i-t-shirts "Face Le New" yathengiswa ngo-2013 nge-$ 50, kwaye kwi-Versace baxabisa ama-dollar ayi-600.
Ukulungeleka, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-American Apparel neVercece evezwe kwimifanekiso ibonakala ngathi ivela kwiqoqo efanayo. Umzobo waseLos Angeles sele usexhaswe ngenye iincwadi ezigunyazisiweyo. Kwaye i-brand yaseItali ayengakhange iphendule ngolu hlobo.
EMoscow, iqoqo elitsha le-brand yaseLashiya yaseLashiya
Ifilosofi yemidlalo: iqoqo le-Ivy Park esuka eBeyonce naseFilie Green
I-Fashionable ehlobo-2008: ii-top and vests
Iveki yeFestile eSt. Petersburg
Iphareji elihlwaya kunye neengxube kunye ne-millet okanye ilayisi: zokupheka kwisitofu okanye kwi-oven
Kutheni sifuna amafayile okucoca amanzi?
Indlela yokuziphatha emva kokungcatsha komyeni wakhe
4 Iingcebiso ezilula zoMoya oyiNtliziyo
Imfihlelo yabasetyhini: njani ukuqonda indoda?
Imilinganiselo yeMasculine yobuhle kunye nomtsalane
Jam kwiipulo nge-sinamoni kunye ne-rum
Ngaba senza i-bikram yoga?